भजनसंग्रह 31 ERV-NE - प्रमुख - Bible Gateway
भजनसंग्रह 30भजनसंग्रह 32
भजनसंग्रह 31 Nepali Bible: Easy-to-Read Version (ERV-NE)
31 हे परमप्रभु, म तपाईंमाथि आश्रित हुन्छु
मलाई निराश नपार्नुहोस्।
मप्रति कृपालु हुनुहोस् र मेरो रक्षा गर्नुहोस्।
2 हे परमेश्वर, मप्रति ध्यान दिनुहोस्।
चाँडै आउँनु होस् अनि मलाई बचाउनु होस्।
मेरो चट्टान हुनुहोस्।
मेरो सुरक्षाको ठाउँ भइदिनु होस्।
मेरो किल्ला बनिनुहोस् मेरो रक्षा गर्नुहोस्।
3 हे परमेश्वर, तपाईं मेरो रक्षक हुनुहुन्छ अनि तपाईं मेरो किल्ला हुनुहुन्छ।
यसर्थ, तपाईंको सुरक्षाको निम्ति मेरो अगुवाइ गर्नुहोस् र मलाई निर्देशन गर्नुहोस्।
4 मेरा शत्रुहरूले मेरै समक्ष पासो थापे।
मलाई तिनीहरूको पासोबाट बचाउँनु होस्।
तपाईं मेरो सुरक्षाको स्थान हुनुहुन्छ।
5 हे परमप्रभु, तपाईं परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसमाथि हामी भरोसा गर्न सक्छौं।
मैले आफ्नो जीवन तपाईंको हातमा राखिदिएँ,
मलाई बचाउनु होस्!
6 म ती झूटा देवताहरू मान्नेहरूलाई घृणा गर्छु।
म परमप्रभुमा मात्र भरोसा गर्छु।
7 हे परमेश्वर, तपाईंको विश्वासपूर्ण प्रेमको आनन्दमा म खुशी हुनेछु अनि नाँच्नेछु।
तपाईंले मेरो पीरहरू देख्नु भएको छ।
मलाई भएका दुःख कष्टहरू तपाईं जान्नुहुन्छ।
8 तपाईंले मेरा शत्रुहरूलाई मलाई लिएर जानु दिनु भएन।
तपाईंले तिनीहरूको पासोबाट मलाई बचाउँनु भयो।
9 हे परमप्रभु, मसँग कैयौं दुःख-कष्टहरू छन्,
यसैले मप्रति कृपा-दृष्टि राख्नुहोस्।
यसैले म यति साह्रो उदास छु मेरा आँखाहरू बिझाउँदैछन्।
मेरो घोक्रो र भूँडीहरू दुखिरहेकोछ।
10 मेरो जीवन उदासीनतामा समाप्त भइरहेछ।
मेरो उमेर नैराश्यमा बितिरहेछ।
मेरा सङ्कटहरूले मेरो शक्ति नाश गर्दै लाँदैछ।
मेरो शक्तिले मलाई छोड्दै गइरहेछ।
11 मेरा शत्रुहरूले मलाई हेला गर्छन्,
अनि मेरा सम्पूर्ण छिमेकीहरूले पनि हेला गर्छन्।
सबै मेरा आफन्तहरूले मलाई गल्लीमा देखेका छन्।
तिनीहरू मसँग डराउँछन् जब गल्लीमा मलाई तिनीहरूले देख्छन्,
तिनीहरू मलाई नदेखे झैं भान गर्छन्।
12 मानिसहरूले आफ्नो हराएको औजार जस्तै
पूर्ण प्रकारले मलाई बिर्सेकाछन्।
13 मेरो विषयमा मानिसहरूले भनेका डरलाग्दा कुराहरू म सुन्छु।
तिनीहरू मेरा विरोधीहरू भए, तिनीहरूले मलाई मार्ने योजना गरे।
14 तर हे परमप्रभु, म तपाईंमाथि भरोसा गर्छु।
तपाईं नै मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ।
15 मेरो जीवन तपाईंको हातमा छ,
मलाई मेरो शत्रुहरूदेखि बचाउनुहोस्।
कतिपय मानिसहरूले मलाई खेदिरहेका छन्।
मलाई तिनीहरूबाट बचाउनुहोस्।
16 कृपया स्वागत जनाएर तपाईंको दासलाई ग्रहण गर्नुहोस्।
ममाथि कृपादृष्टि परोस् र मलाई बचाउनु होस्!
17 हे परमप्रभु, मैले तपाईंलाई प्रार्थना गरें।
यसर्थ म असन्तुष्ट हुँदिन।
दुष्ट मानिसहरू असन्तुष्ट हुनेछन्।
तिनीहरू निस्तब्ध चिहानभित्र जानेछन्।
18 ती दुष्टहरू अंहकार गर्छन्
अनि राम्रा मानिसहरूको विषयमा झूटा कुरा गर्छन्।
ती दुष्टहरू घमण्डी छन्,
तिनीहरूको झूटो बोल्ने ओंठहरू मौन हुनेछन्।
19 हे परमेश्वर! तपाईंले धेरै आश्चर्य-जनक कुराहरू आफ्ना भक्तजनहरूको निम्ति लुकाउनु भएको छ।
तपाईंले असल कुराहरू प्रत्येक मानिसहरूलाई गर्नु हुन्छ
जसले तपाईंलाई विश्वास गर्छन्।
20 धर्मी मानिसहरूलाई कष्ट दिनलाई दुष्टहरू एक जुट हुन्छन्।
ती दुष्टहरू लडाइँ गर्न तैयार हुन्छन्।
तर तपाईंले ती मानिसहरूलाई लुकाउनु हुन्छ र तिनीहरूको रक्षा गर्नु हुन्छ।
तपाईंले तिनीहरूलाई आफ्नो छत्रछाँयामा जोगाउनु हुन्छ।
21 परमप्रभुको स्तुति होस्!
जब सम्पूर्ण शहरलाई शत्रुहरूले घेरेका थिए,
आफ्नो स्नेहपूर्ण करूणा अद्भूत प्रकारले मलाई देखाउनु भयो।
22 म भयभीत थिएँ अनि मैले भने, “म यस्तो ठाउँमा छु,
जहाँ परमेश्वरले मलाई देख्न सक्नु हुन्न।
तर मैले तपाईंलाई प्रार्थना गरें,
अनि तपाईंले मेरो प्रार्थना सहायताका लागि सुन्नु भयो।”
23 हे परमेश्वरका भक्तजनहरू, तिमीहरूले परमप्रभुलाई प्रेम गर्नु पर्छ!
परमप्रभुले तिनीहरूलाई रक्षा गर्नुहुन्छ जो उहाँप्रति विश्वासी छन्।
तर परमप्रभुले तिनीहरूलाई दण्ड दिनुहुन्छ जसले आफ्नो बलको अहंकार गर्छन्।
उहाँले तिनीहरूलाई दण्ड दिनुहुन्छ जो त्यसको लायक छन्।
24 बलियो र साहसी होऊ, तिमीहरू सबै जो परमप्रभुको सहयोग पर्खिरहेका छौ।